iminyaka 2 10 izinyanga ezedlule #20 by Dariussssss
Uma uhlangabezana nezinkinga, amaphutha noma uma unemibuzo ethile ngayo X-Plane Simulator, ithumele lapha. Siphinde sitshele ngezisombululo nezixazululo zezinkinga ezahlukahlukene namaphutha ku X-Plane.
unyaka 1 6 edlule #1062 by jamsta
Ufuna noma yini x-plane imidlalo
1 inyanga 1 iviki edlule #1503 by thimeu
UDariussssss wabhala: Uma uhlangabezana nezinkinga, amaphutha noma uma vtc orly imibuzo ethile mayelana X-Plane Simulator, ithumele lapha. Siphinde sitshele ngezisombululo nezixazululo zezinkinga ezahlukahlukene namaphutha ku X-Plane.
Lesi isikhathi sami sokuqala lapha futhi ngifuna ukusho ukuthi ngijabule kakhulu ngokuba lapha futhi ngihlanganyele umbono wami.